Ny ankamaroany mantsy dia mihevitra fa ny politika dia ny fahaizana manao propagandy na koa ny famoronana ireo fampanantenana poak’aty sy famitahana mpifidy. Ary misy mpanao politika mihevitra fa mahay politika rehefa mahay mamadika palitao ary tsy mena-mivadika amin’ny hevitra nijoroany tany aloha. Izany no mahatonga antsika Malagasy lasa kivy ary tsy tia hiherika amin’ny politika intsony. Ho an’ireo mpitondra eto Afrika kosa , ny fahaizana politika dia midika ho famoronana ireo hevitra sy lalàna ahafahana mijanona faran’izay ela indrindra eo amin’ny fitondrana, na mandra-pahafaty mihitsy aza. Indrisy fa izany no manjaka eto amintsika sy eto Afrika.
Ny politika nefa dia foto-kevitra na vinam-piarahamonina entina mandamina sy mampandrosoana ny firenena. Mahay politika izay olona manana vina azo tanterahana ary mitondra fandrosoana ho an’ny fireneny. Ny politika ihany koa dia fampianarana ireo mpikambana ao amin’ilay antoko na ireo mpiara-dia aminy ny fomba tsara sy mety ho an’ny firenena. Ao anaty antoko politika no tokony hanabeazana an’ireo mpikambana momba ny ady amin’ny kolikoly. Ao ihany koa no hanabeazana ny fanarahan-dalàna sy fanarahana ireo fitsipiky ny antoko. Rehefa mahazo izany ireo mpikambana dia manana adidy lehibe hizara izany eny anivon’ny fiaraha-monina mba hitaizana ny mpiray tanindrazana.Tsy tokony hiankina amin’ny olona tokana raha izany no politika fa hevitra azo avy amin’ny mpikambana ao amin’ny antoko. Eto amintsika anefa dia tsapa fa olona no safidiana. Misy ary moa dia anaran’olona no entina ho an’ilay antoko na fikambanana politika. Azo lazaina fa mbola marefo sy malemy ny fanabeazana ara-politika eto Madagasikara ary tena mila ezaka be isika hanatsarana an’io satria izany no lalana tokana hitondra antsika mankany amin’ny fampandrosoana.